Isbeddellada ku dhaca muraayadaha indhaha ee ragga sannadkan | Ragga Stylish
Paco Maria Garcia | | Dhameystirka
Muraayadaha indhaha waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan uguna muhiimsan ee adduunka moodada. Iyagu waa kuwo wax ku ool ah oo lagama maarmaan u ah in indhaha laga ilaaliyo qorraxda, waxa ugu fiicanna waa inay jiraan tiro aan badnayn oo moodello ku habboon dhadhanka qof walba..
Sannadkan gaar ahaan way taagan yihiin afar nooc oo cajiib ah oo muraayadaha muraayadaha indhaha ah.
1 Muraayadaha muraayadaha indhaha: moodooyinka ugu caansan
1.1 Maamulaha naadiga Ray-Ban
1.2 Isku-darka Dior
2 Muraayadaha qoraxda ee xilli ciyaareedka
2.1 Hawkers, Kaarboon Madoow Mid
Muraayadaha muraayadaha indhaha: moodooyinka ugu caansan
Maamulaha naadiga Ray-Ban
Ray-Ban waa mid ka mid ah noocyada muraayadaha indhaha ee caadiga ah. Sannadkan, qaabka Clubmaster-ka ayaa ah kan ugu badan ee taagan, wuxuu hayaa qaabka Ray-Ban ee soo jireenka ah laakiin isla waqtigaas wuxuu qatar galinayaa naqshad casri ah. Dareenkan, birta hoose ee hoose iyo walxaha acetate ee sare ayaa istaaga. Tani waa mid ka mid ah nashqadaha ugu xiisaha badan xilliyada.
Dior waa mid ka mid ah noocyada ugu muhiimsan uguna caansan adduunka oo dhan, iyo waxyaabo kale oo loogu talagalay muraayadaha indhaha. Qaabka isku dhafka ah ee Dior ayaa suuqa ku fiday in muddo ah iyo wuxuu sii wadaa inuu isu muujiyo inuu yahay mid ka mid ah muraayadaha ugu fiican xilli ciyaareedka. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee muraayadahaas waxaa ka mid ah in jirku ka samaysan yahay qalabka muraayadaha. Shaki la'aan, waa mid ka mid ah naqshadaha ugu caansan adduunka.
Muraayadaha qoraxda ee xilli ciyaareedka
Hawkers, Kaarboon Madoow Mid
Hawkers waxay la mid tahay muraayadaha casriga ah; Waxay leeyihiin qaab si fiican ula qabsada jimicsiga jirka ee kala duwan. Dareenkan, Moodhadhka Kaarboon Mugdiga ah kaliya ma laha naqshad nadiif ah, oo aad u 90s ah, laakiin sidoo kale waa tartan aad u qiimo badan gudaha suuqa indhaha.
Muraayadaha muraayadaha indhaha ayaa ah kuwa ugu horreeya ee lagu daro daaweynta kala-goysyada. Qaabka 2053 waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan xilligan; Kaliya maahan inay qaab gaar ah u qaabeysan yihiin, laakiin sidoo kale way fudud yihiin illaa heer aysan si dhib leh u dareemin inay xiran yihiin. Tiknoolajiyadooda jar-jarista ayaa ka dhigaysa iyaga mid ka mid ah muraayadaha muraayadaha ee ugu wax ku oolka badan sannadkan.
Afartan nooc ee muraayadaha indhaha ayaa leh naqshado u gaar ah oo ku habboon dhadhanka qof walba. Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale la qabsan karaan miisaaniyadaha kala duwan; muraayadaha muraayadaha casriga ah ee sanadkan waa avant-garde, wax ku ool ah oo aad u fudud.
Ilaha sawirka: YouTube / Optical-center.es
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Dhameystirka » Muraayadaha casriga ah ee sanadkaan